WireGuard Inopa MaharaBSD Kugadziriswa uye Mamwe maTweaks | Linux Vakapindwa muropa
Isu tatova neshanduro nyowani ye WireGuard izvo, kune avo vasingazvizive, ndeye yemahara uye yakavhurwa sosi software inoedza kushandisa maVPN matekiniki ekugadzira kuchengetedzeka kuri pakati pekubatana. MuLinux, inomhanya senge module yeiyo kernel pachayo, iyo inoipa mashandiro ari nani pane dzimwe nzira senge IPsec, yakavhurikaVPN, nezvimwe. Iyo itsva vhezheni, WireGuard 0.0.20190406 ine zvimwe zvinonakidza kugadzirisa izvo zvatinozotaurira nezvazvo.
WireGuard Mutungamiri weMutungamiri, Jason donenfeld, yakazivisa kuburitswa kwazvino kunouya mushure memavhiki mashoma ebasa rakasimba kubvira pakavhurwa vhezheni pakupera kwaKukadzi gore rino. Zvakanaka, kutaura zvakananga pamusoro penyaya dzatinogona kuwana muWiredGuard, zvinofanirwa kutaurwa kuti ine zvigadzikiso zvakati wandei zvembug zvaive mushanduro dzapfuura, pakati pazvo zvigadziriso zveFreeBSD kubvira, rangarira kuti haisi kungowanikwa chete kuLinux, asi zvakare yeimwe ino inoshanda system, Android, iOS, macOS, nezvimwe.
Kunewo zvakare kumwe kugadziridzwa kuitira kuti zvishandiso zveWireGuard zvienderane neiyo Haiku inoshanda sisitimu, kunyangwe kana ichigere kuita kuitiswa kweiyi BeOS-based operating system yatakataura nezvayo muLxA kakawanda. Saizvozvowo, pane kuvandudzwa mune zvimwe zvinhu, zvakaita seWigeGuardyezvishandiso zvemamwe mapuratifomu, kunyanya kuderedzwa kudiki kweiyo C kodhi kwakagadzirwa.
Saizvozvo, isu tine zvimwe zvigadziriso zvinoratidzwa ne networking nyanzvi Dave Miller yeLinux, kurerukirwa kweblake2s uye kuenderana magadzirirwo eiyo Linux 5.1 kernel kodhi. Zvese izvi kugadzirisa izvi zvinonakidza mutengi-server chirongwa chinotibvumidza isu kuisa, kugadzirisa uye kuvhura VPN zviri nyore uye nekukurumidza. Tunnel yemazuva ano uye yakachengeteka ine yazvino cryptography algorithms yekupa yakawanda chengetedzo, pasina kudzikisira mashandiro sezvazvakaita mune mamwe mapurojekiti atotaurwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » WireGuard inopa MaharaBSD gadziriso uye mamwe ma tweaks
frank castle akadaro
Iwe unogona here kuita dzidziso yemabatiro ekugadzira VPN kubatana neiyi software muUbuntu?